बालुवाटारमा ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठक जारी :: Setopati
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठक बालुवाटारमा सुरू भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि भावी रणनीतिबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएका हुन्।
बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको भए पनि बालुवाटारमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेटको बैठक बसेकाले स्थायी कमिटी बैठक ढिला गरी सुरू भएको हो।
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अब आफूनिकटलाई के भन्छन् भन्नेमा आमचासो छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो पद जोगाउँछिन् कि प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याउन सक्ने अध्यादेश जारी गरेर उनलाई राजनीतिक जीवन दान दिन्छिन्?
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर बदर गरिदिएपछि नेपाली राजनीति नयाँ मोडमा आइपुगेको छ। अबको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो हुन्छ भन्नेमा आमचासो छ। भावी राजनीतिको तस्बिर एउटा पार्टी वा संस्थाले मात्र 'लिड' गर्ने छैन, धेरै विषय निर्णायक हुनेछन्। त्यसमध्ये तीन प्रश्न महत्वपूर्ण छन्।
पहिलो, प्रधानमन्त्री ओलीले अब के गर्छन्?
उनीनिकट नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर, प्रचण्ड-नेपालसँग सम्झौता गरेर पार्टीमा भूमिकाविहीन भएर बस्ने कुनै सम्भावना छैन। उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले मंगलबार राति नै समाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै ओलीले राजीनामा नदिने तर संसद ‘फेस' गर्ने बताएका छन्।
'सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबैले यसअघि गरेको काम असंवैधानिक भनिसकेको छ र १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको छ। अब के गर्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको स्वेच्छाको विषय नभई उहाँहरू अदालतको आदेश पालना गर्न बाध्य हुनुहुन्छ,’ भट्टराईले भने।
'अब पनि उहाँले ओलीका असंवैधानिक कदममा सही छाप गर्दै जानुभयो भने त्यो गणतन्त्रमाथिको कुठाराघात हुन्छ,’ अधिवक्ता भट्टराईले भने, 'उहाँले त्यस्तो गर्न पाउनुहुन्न।'
ओली र कांग्रेसलाई बाहिर राखेर मधेसवादी दलसँग मिलेर बनाएको सरकार बलियो नहुने भएकाले प्रचण्ड-नेपाल समूहले कांग्रेसलाई साथमा लिने प्रयत्न गर्नेछ। उसलाई सरकारको नेतृत्व दिने कि आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गराउने भन्ने थप 'नेगोसियसन'को विषय हो। आफू र समाजवादी मिलेर पनि सरकार बन्न नसक्ने अवस्था आए कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रचण्ड-नेपाल राजी हुन सक्छन्। राजी भएनन् भने ओलीले समर्थन गरेर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ। यस्तो होस् भन्ने उनीहरू चाहँदैनन्। प्रचण्ड-नेपालमात्र होइन झलनाथ खनालले समेत देउवालाई हिजै फोन गरिसकेका छन्। आफूहरू नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बनाउने भन्नेमा खुला रहेको प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १२, २०७७, ०२:०४:००